Krita 4.2.9 anosvika achigadzirisa bugs muPython uye akawanda akagadziriswa | Linux Vakapindwa muropa
Ingori pasi pemwedzi mina yapfuura, iyo KDE yekuvandudza timu yakakanda v4.2.8 yema dhizaini ayo akagadzirwa uye nevanoveza mifananidzo. Maawa mashoma apfuura akaparura Krita 4.2.9, iyo inofanirwa kuve yekupedzisira yekugadzirisa vhezheni yeiyi nhevedzano uye, zvinoenderana nezvavanotiudza mu kusunungura chinyorwa, «yanga iri imwe yematanho akaomesesa avakaedza«. Muchidimbu, nekuti ivo vaifanira kugadzirisa matambudziko akagadzirwa neshanduro dzakapfuura.
Munguva yakapfuura, pakanga paine njodzi zhinji: kana uchivandudza Python, iyo Windows vhezheni yakamisikidzwa. Kune rimwe divi, Apple yakagadzirisa imwe yemaitiro ayo uye izvi zvakamutsidzira iyo macOS vhezheni. Senge sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, ivo Krita vanogadzira vakaburitsa vhezheni nyowani yemamwe maraibhurari, uye izvo zvakatoita kuti zvese zviwedzere Chero zvazvingaitika, Krita 4.2.9 inofanirwa kugadzirisa ese mabhugi uye yaive yakagadzika vhezheni munguva yayo beta, saka zvakakodzera kuti uvandudze nekukurumidza sezvazvinogona.
Krita 4.2.9 yakakwira
Iyo bhurasho indekisi yakagadziridzwa: haichisiri yekupenengura painenge ichisimudzira pamusoro pechando.
Yakawedzera "Airbrush" uye "Airbrush Speed" kune iyo Blend Ruvara bhurasho, uye nyowani Proposition marongero, zvakare yeiyo Blend Ruvara bhurasho, iyo inobvumidza iyo bhurashi chimiro kuti iratidze kushandisa akasiyana maseru.
Basa idzva «Govanisa Rukoko muSelection Mask».
Kugadziriswa kwemhosho, makumi manomwe makumi manomwe aunogona kuona mune iyi yekubatanidza yapfuura (kuburitsa chinyorwa).
Shanduro nyowani ikozvino iripo pane yayo yepamutemo webhusaiti, iyo iwe yaunogona kuwana kubva Iyi link. Vashandisi veLinux vane iyo nyowani vhezheni inowanikwa muAppImage, asi inogona zvakare kuiswa mune yayo Flatpak vhezheni (link) kana kuburikidza neyekuchengetera, kana isu tikavhura terminal ndokunyora zvinotevera:
Krita 4.2.9 yakagadzirisa chero matambudziko awanga uchisangana nawo?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Krita 4.2.9 anosvika achigadzirisa bugs muPython uye nekugadziriswa kweWindows uye macOS
iSH: chirongwa chekumhanyisa Linux shell nharaunda pane ako maIOS